I-App Sun, i-70m ukusuka elunxwemeni - I-Airbnb
I-App Sun, i-70m ukusuka elunxwemeni
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguSara
Le ndlu inemigangatho emibini, inommandla oyi-54 m2. Kumgangatho ophambili kukho igumbi lokuhlala elinekhitshi kwindawo enkulu efanayo, igumbi lokuhlambela kunye nebalcony enomtsalane. Ukunyuka kwezitebhisi, uya kufumana igumbi lokulala elinothando elinendawo encinci yokuhlala.
Sinobubele kwisilwanyana sasekhaya kwaye samkela esinye isilwanyana sasekhaya simahla, kodwa siyakuhlawulisa umrhumo we-5€ ngosuku ngesilwanyana ngasinye esongezelelweyo okokuqala.
wamkelekile kwindawo yethu ye-Airbnb.
Eli ligumbi lethu lokuqala kumagumbi amathathu, likhuthazwe bubushushu bolwandle olunelanga elikumgama nje ongama-70m. Ihlotshiswe ngemibala efudumeleyo, kunye nezinto zomthi wendalo.
I-balcony ijonge ngasentshona, ngoko rhoqo ngorhatya uya kunikwa umbono owahlukileyo wokutshona kwelanga phezu kolwandle.
Le ndlu inegadi enkulu enengca oya kukhululeka ukuyisebenzisa. Sikwakunika ithuba lokusebenzisa igrill yethu xa ufuna.
Enye yezona ndawo zintle zasePula. Yindawo ezolileyo nekhuselekileyo, elungele abantwana kunye nezilwanyana zasekhaya. Kukho ipaki ekumgama nje oyi-50m kunye neendawo zokudlala ezimbini kumganyana nje omfutshane.
Umbindi wesixeko umgama oziikhilomitha ezi-3, ufikeleleka ngokulula nokuba ngemoto, ngebhasi okanye ngeenyawo. Kufuphi kuthi kukho iindawo zokutyela ezininzi ezilunge kakhulu, inkundla yentenetya, i-volley yaselwandle kunye nezinye izinto zokuzonwabisa.
Sinethemba lokuba siya kukwazi ukunceda undwendwe lwethu ngayo nantoni na abanokuyidinga. Sihlala kumgangatho ophantsi kwamagumbi, ngoko sikude nezinyuko ezimbalwa.
Sithetha isiTaliyane, isiNgesi, isiSlovenian, isiCroatia kunye neSpanish, kodwa siya kufumana indlela yokunxibelelana nokuba asilwazi ulwimi lwakho.